သံချပ်ကာ ၁၅၀နည်းစနစ်အခြေခံ ထရိတ်ဒင်း နည်းစနစ်
သံချပ်ကာ ၁၅၀နည်းစနစ်အခြေခံ ထရိတ်ဒင်း နည်းစနစ်က ထရိတ်ဒါတွေ အတွက် ဈေးကွက်မှာထရိတ်ဒင်းလုပ်ဆောင်ရာမှာ တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်. ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းလိုက်နာပြီး ထရိတ်ဒင်းလုပ်တဲ့ ထရိတ်ဒါတွေဟာ ထရိတ်ဒင်းလုပ်မှု အကြိမ်တစ်ရာမှာ ၈၀လောက်အထိ အမြတ်ရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက် လူသိများလာခဲ့ပါတယ်. ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတစ်ဦးဖြစ်ချင်ရင် ဒီနည်းနစ်ကို လေ့လာကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်.
အချိန်ကာလ - H1, H4, D1
ငွေကြေးအတွဲများ - ယူရို/ဒေါ်လာ၊ ပေါင်/ဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာ/ဆွစ်ဖရန့်၊ ဒေါ်လာ/ဂျပန်ယန်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်
အင်ဒီကေတာများ - အိတ်ပိုတန်ရှယ် မှုဗင်း အဲဗရိတ် ပျမ်းမျှရွေ့လျှားနှုန်း
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဈေးတန်းဟာ သူ့ရဲ့ အောက်ခြေ ပြန်ကန်နိုင်တဲ့ စပို့လိုင်းအထိရောက်အောင် အချိန်တိုအတွင်း ပြန်ကန်ကျဆင်းတတ်ပါတယ်. ဒီနည်းစနစ်ကိုသုံးပြီး ထရန်းတစ်ခုပြန်ကန်တဲ့အခါမှာ အချိန်တိုအတွင်း ဈေးကွက်ကို ၀င်ရောက်ပြီး အမြတ်ရယူနိုင်မယ့် နေရာကို ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်. ပြီးတော့ ဒီလိုကြည့်တဲ့နေရာမှာ မှုဗင်း အဲဗရိတ် ပျမ်းမျှရွေ့လျှားနှုန်းပြ အင်ဒီကေတာကိုပါ အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်. (MAကိုသုံးတဲ့နေရာမှာ ၁၅၀ နဲ့ ၃၆၅ ကာလတွေကိုကြည့်ပြီး ၀င်ရမယ့်ပွိုင့်ကို ပိုပြီး အတည်ဖြစ်စေဖို့အတွက် ပိုပြီး အချိန်တိုတဲ့ ၆နဲ့ ၂၅ကာလပိုင်းတွေကိုသုံးပါ).
ထရိတ်တဲ့နေရာမှာ H4-D1အချိန်ပိုင်းတွေနဲ့ သင့်အ၀င်ပွိင့်ပိုပြီးသေချာစေဖို့အတွက် ပိုပြီး အချိန်တိုတဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးတွေမှာသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်. ပထမပိုင်း (၁၅၀နဲ့ ၃၆၅MAလိုင်းတွေရဲ့နားရှိတဲ့) အောက်ခြေ စပို့လိုငက်းတွေနားကို ဈေးတန်းရောက်တဲ့အခါ သင့် ငွေအရှုံးပြနိုင်မေမယ့် နောက်ပိုင်း ထရန်းလမ်းကြောင်းကြီးကြီးမိတဲ့အခါ များပြားတဲ့အမြတ်ငွေရရှိစေပါလိမ့်မည်.
ဈေးတန်းက နှေးနေတဲံ အိတ်ပိုတန်ရှယ် မှုဗင်း အဲဗရိတ် ပျမ်းမျှရွေ့လျှားနှုန်းကို ကျော်တက် ဖောက်ထွက်ရပါမယ်.
MA ၆က နှေးနေတဲ့ MAလိုင်းနဲ့ လယ်ဗယ်အတူတူ သို့မဟုတ် အထက်မှာ ရှိနေသင့်ပါတယ်.
ဈေးတန်းက ပိုမြန်တဲ့ MAကို ရောက်သွားပြီးတဲ့ ထိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြန်ကန်မယ့် ဆစ်ဂနယ်ကိုစောင့်ဖို့အတွက် ပိုအချိန်တိုတဲ့ အချိန်ပိုင်းအတိုလေးတွေကို ကြည့်ရပါမယ်.
ဒီဆစ်ဂနယ်ကို H4အချိန်ပိုင်းမှာတွေ့ရရင် အတည်ဖြစ်ဖို့အတွက် H1အချိန်ပိုင်းကိုကြည့်ရပါမယ်. အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းမှာပါ အတည်ဖြစ်မှသာ ပြန်ကန်မယ့် ပွိုင့်ကိုကြည့်ပြီး ဈေးကွက် ၀င်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်. Stop lossကိုလဲ အနီးဆုံးနဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ ထားသင့်ပါတယ်. ပုံမှန်အားဖြင့် ကြည့်တဲ့ ကန်ဒယ်အတုံးရဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ ထားသင့်ပါတယ်. Take-profitကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့ stop-lossအချိုးရဲ့ နှစ်ဆအကွာအဝေးမှာ ထားရပါမယ်.
ဒီ နည်းစနစ်ကို သံချပ်ကာ ၁၅၀နည်းစနစ်လို့ခေါ်ပြီး အသုံးချတတ်ရင် တကယ်အကျိုးရှိထိရောက်တဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ဒီနည်းစနစ်ကို အသုံးချခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ ထရိတ်ဒင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ အကျိုးအမြတ်ရရှိစေပါလိမ့်မည်